Hoobiyuhu uma muuqan mid meel fog ka yimid - CCW | KEYDMEDIA ENGLISH
Hoobiyuhu uma muuqan mid meel fog ka yimid - CCW
Musharrax Madaxweyne, Cabdiraxmaan, wuxuu soo jeediyay in wixii hadda ka danbeya kulamada, khudbadaha iyo doorashada Guddoonka Labada Aqal iyo ku xigeennadooda lagu qabto Teendhada Afisyoone, si looga fogaado falalka amni darro oo la maleegayo.
MUQDISHO, Soomaaliya – Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa xaqiijiyay in labo askari oo ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah, ay maanta ku dhaawacmeen madaafiicdii lagu garaacay xarunta Golaha Shacabka ee Villa Hargeysa.
Cabdiraxmaan, oo ka maqnaa kulamada hore ee Baarlamaanka, ayaa maanta tagay, kulanka wadajirka ahaa ee Golayaasha, kaasoo lagu asxinayay ajande, la xariira, wax ka baddelka Habraaca ku-meel-gaark ah ee u gaarka ah Doorashooyinka Guddoonka labada Gole.
Hoggaamiyaha Mucaaradka, wuxuu sheegay in hoobiyaha ku soo dhacay albaabka laga galo xarunta Golaha Shacabka uusan ahayn mid meel fog laga soo tuuray, isagoo ku tilmaamay fal lagu qal-qal galinayay amniga, laguna diiddan yahay dhameystirka doorashooyinka.
“Wuxuu Alle maanta naga samata bixiyey hoobiye lagu garaacay xarunta Golaha Shacabka, hoobiyuhu uma muuqan mid meel fog ka yimid, wuxuuna qayb ka yahay qalqal gelinta amniga iyo isku dayga dib loogu dhigayo doorashada”. Ayuu yiri Warsame.
Waiirkii hore ee Qorsheynya, Dowladdii Ku meel gaarka ahayd, wuxuu ka mid yahay mucaaradka sida adag uga soo hor jeeda hannaanka ay wax u wadaan Kooxda waqtigu ka dhamaaday, wuxuuna ahaa shaqsigii ugu horreeyay ee fahma halka ay u socdaan 2017-kii.
Hore waxaa loo qorsheeyay in doorashada Madaxweynaha lagu qabto xeyndaabka garoonka diyaaradaha oo ah goob aad loo ilaaliyo, hayeeshee, weerarka maanta lagu qaaday Villa Hargeysa, ayaa doorashada Guddoonnada Golayaasha u baddeli karta isla goobtaas.